Gọọmenti Anambra Ebidola Ikesà Ihe Erimeri E Butere Maka Korona | Igbo Radio
Gọọmenti Anambra Ebidola Ikesà Ihe Erimeri E Butere Maka Korona
Gọọmenti steeti Anambra amalitela ikesà ihe erimeri ndị ahụ a tụkọtara site n'aka òtù a kpọrọ 'Coalition Against COVID-19' (bụ CACOVID n'aha mkpìrìsì) tụkọtara maka ibu agha megide ọrịa korona na ọnọdụ ihe isi ike so ya.
Mmemme ịgbape nkesà ihe erimeri ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'isi ụlọọrụ na-ahụ maka ọnọdụ gbanụgbanụ na steeti Anambra, bụ 'State Emergency Management Agency (SEMA)', ma bụrụkwa nke a gbapere site n'aka Gọvanọ Willie Obianọ.
N'okwu ya na mmemme ahụ, Gọvanọ Obianọ nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya, bụ Dọkịta Nkem Okeke kèlèrè òtù CACOVID maka ezi ọrụ ha ahụ, ma kọwaa ya dịka nke kwesiri nñòmi n'ihi na oge ọrịa korona a, bụ nnọọ oge mmadụ kwesiri iji nyerịtara ibe ya aka karịa, n'ihi ihe isi ike, ụbịam, aka nkụchasị, na ajọ ọnọdụ ndị ọzọ ya bụ ọrịa wètara, bụ nke metụtakwara onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche.
Dịka ọ na-ekwe nkwà na a ga-ekesà ihe erimeri ahụ n'usoro kwesiri ekwesi iji hụ na o rutere ndị e mebeere ya aka; ọ kpọzịrị òkù ka onye ọbụla jikọọ aka ọnụ n'ibu agha megide ọnọdụ ahụ, n'ihi na ọ bụ naanị site n'ụzọ dị etu ahụ ka a pụrụ isi memilaa ya bụ ọrịa zèéré ụwa.
N'okwu nke ya, onyeisi ụlọ ọba ego ala Nigeria bụ (Central Bank of Nigeria), Maazị Godwin Emefiele, nke ọ bụ onyeisi ụlọ ọba ego GTBank na mpaghara ahụ, bụ Chima Azubuike nọchitere anya ya, kọwara CACOVID dịka ótù n'ime òtù nọ n'isi n'agha ahụ a na-ebu megide ọrịa korona n'ala Nigeria, ma kọwaa na ebumnobi e jiri bukọtasị ihe erimeri ahụ na steeti Anambra bụ iji bèlatara ụmụ mmadụ agụụ na ọnọdụ ihe isi ike nke oge ọrịa a wetara.
O nyekwazịrị ndụmọdụ ka e kesàá ihe ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi, iji hụ na e mezùpụtara ebumnobi ahụ e jiri bute ya.
Na ntụnye nke ya, ode akwụkwọ izugbe steeti ahụ, bụ Ọkammụta Solo Chukwulobelụ kelere òtù ahụ nakwa òtù, ụlọọrụ nakwa ndị mmadụ ọzọ dịgasị iche iche gbatagooro steeti ahụ ọsọ enyemaka na nkwàdo n'ụzọ dị iche iche n'ime oge a, ma mee ka a mara na ọ bụghị naanị ndị bụ ụmụafọ steeti Anambra ka a ga-ekesàra ihe erimeri ahụ.
N'okwu nke ya, otu onye n'ime ndị soro keta òkè n'ihe erimeri ahụ, bụ Oriakụ Nkiruka Okoye kèlèrè òtù CACOVID, gọọmenti steeti Anambra na gọọmenti ala Nigeria maka ezi agbambọ, nkwàdo na enyemaka ha na-enye ụmụ mmadụ ha kemgbe ya bụ ajọ ọrịa malitere mebe mkpamkpa. O kpekwazịrị ka Chukwu Okike Abịama wezega ya bụ ọrịa ka ụwa na ụmụ mmadụ wee nwere onwe ha ma nwekwa ezumike.
Ndị dị iche iche sonyere na mmemme ahụ ụbọchị ahụ gụnyere onyeisi ụlọọrụ SEMA, bụ Maazị CY Agupugo; Komishọna na-ahụ maka ahụ ike, bụ Dọkịta Vincent Okpala; onyeisi ọchịchị obodo Isuanịọcha, bụ Maazị Oforbuike Mkpume, na ògbò ya nke Nsugbe, bụ Maazị Osita, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe erimeri ahụ a malitere ikesà gụnyere akpa osikapa, igbe nri noduul, akpa garị, akpa nnu, tinyere ụfọdụ ihe ndị ọzọ, bụ nke juru nnukwu ụgbọala gwomgworo iri ise na ise, ebe gọọmenti ka na-atụkwa anya nke juru ụgbọala gwomgworo iri atọ na atọ ọzọ site n'aka òtù CACOVID ahụ, ka mkpokọta ọnụọgụgụ ya wee dịzie iri asatọ na asatọ.